Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Air Canada yongeza umthamo owongezelelweyo kwiVancouver
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-Air Canada yongeza iitoni ezingama-586 zomthamo wempahla, ezimele i-3,223 cubic metres ukuxhasa ikhonkco lokubonelela ngezoqoqosho lweBC kunye neemfuno zoluntu.
I-Air Canada ibhengeze namhlanje ukuba inyuse kakhulu umthamo wempahla ukungena nokuphuma eVancouver phakathi kwe-21 kaNovemba kunye ne-30 ukusuka kwiindawo zayo eToronto, eMontreal naseCalgary njengoko isebenza ukuqinisekisa ukuba ikhonkco lokubonelela ngezoqoqosho olubalulekileyo British Columbia ziyagcinwa kulandela iimpembelelo zezikhukula zeveki ephelileyo. Lilonke, i-Air Canada yongeza iitoni ezingama-586 zomthamo wempahla, ezimele i-3,223 cubic metres ukuxhasa ikhonkco lokubonelela ngezoqoqosho lweBC kunye neemfuno zoluntu. Umthamo owongezelelweyo ulingana nobunzima malunga nama-860 amaxhama amadala.
“Ikhonkco lokubonelela ngezoqoqosho libalulekile, kunye nokunceda ukuxhasa ukuthuthwa kwempahla ngokungxamisekileyo ukuya nokuphuma British Columbia, siye sandisa umthamo kwi-YVR hub yethu ngokusebenzisa ukuguquguquka kwe Air CanadaIinqwelo-moya zokuhlenga-hlengisa iinqwelomoya zabakhweli ezingama-28 ukusuka kwinqwelomoya enomzimba omxinwa ukuba zisetyenziswe ngomzimba obanzi iBoeing 787 Dreamliners, iBoeing 777, kunye nenqwelomoya yeAirbus A330-300. Olu tshintsho luya kuvumela ukuba iitoni ezingama-282 ezongezelelweyo zeempahla zihanjiswe kwilizwe lonke kwiinqwelomoya ezicwangcisiweyo, ”utshilo uJason Berry, uSekela Mongameli weCargo, eAir Canada.
Ukongeza, i-Air Canada Cargo iya kuqhuba iinqwelomoya ezili-13 ezongezelelweyo ezithwala imithwalo phakathi kweToronto, Montreal kunye neCalgary hubs kunye neYVR isebenzisa iinqwelomoya ezibanzi, ibonelela malunga neetoni ezingama-304 zomthamo owongezelelweyo. Ezi nqwelo-moya ziza kunceda ukuhambisa iposi nezinto ezibolayo ezifana nokutya kwaselwandle, kunye nezixhobo zeenqwelo-mafutha nezinye izinto zemizi-mveliso,” uqukumbele watsho uMnu. Berry.
I-Air Canada ikwasebenza neqabane layo lengingqi i-Jazz Aviation ukubonelela ngomthamo owongezelelweyo womthwalo wengingqi ngokuguqula okwethutyana i-Air Canada Express De Havilland Dash 8-400 ukusuka kubume bayo abakhweli besiqhelo ibe kulungiselelo olulodwa lothutho. Le Dash 8-400 Simplified Package Freighter esetyenziswa yiJazz inokuthwala i-18,000 lbs iyonke. (8,165 kg) yomthwalo kwaye iya kuthunyelwa ukuthutha iimpahla ezibalulekileyo, kunye nempahla yabathengi kunye nemizi-mveliso kwaye iya kuba senkonzo kwangoko kule veki.
Kwiveki ephelileyo, njengoko impembelelo yezikhukula etshabalalisayo iye yabonakala, Air Canada ngokukhawuleza wongeze umthamo kwinethiwekhi ye-Air Canada Cargo ngokufaka endaweni yenqwelomoya enkulu ebanzi kwiinqwelomoya zabakhweli ezili-14 eziya eVancouver.
Ukongeza kumthamo owongezelelweyo womthwalo, Air Canada linyuse nenani lezihlalo ezifumanekayo kubathengi eKelowna naseKamloops ukusukela nge-17 kaNovemba, bongeza malunga nezihlalo ezili-1,500 kuzo zombini iindawo zoluntu ngokusebenzisa iinqwelomoya ezinkulu ezindleleni. Oku kwenze ukuba abantu abachatshazelwe kukuvalwa kohola wendlela babhabhe ukungena nokuphuma kwezi zikhululo zeenqwelo moya, kunye nomthamo wemithwalo yezi nqwelomoya zabakhweli, kukwavumeleke ukuthuthwa okubalulekileyo koncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuya kule mimandla.
I-Air Canada iyaqhubeka nokubeka esweni imeko yaseBritish Columbia ngokusondeleyo kwaye iya kulungelelanisa abakhweli kunye neshedyuli yempahla ngokufanelekileyo.